Ny fanaintainana ara-barotra amin'ny mailaka mitovy… 10 taona aty aoriana.
Talata, Oktobra 18, 2011 Alakamisy, Septambra 19, 2013
Nandona ny arabe aho tamin'ny herinandro lasa mba hamangy a Delivra mpanjifa ary miteny ao amin'ny Fikambanana eMarketing hetsika any Providence, RI. Ny zavatra nianarako dia ity… ireo mpivarotra mailaka dia manana olana mitovy amin'ny azy ireo 10 taona lasa izay fony aho nanomboka tamin'ity orinasa ity. Na eo aza ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny fananganana, ny mpivarotra tena izy dia mitolona isan'andro amin'ny paikady fananganana lisitra, fandraisana andraikitra, fandrefesana, fanaterana, taham-pahafahana ary paikady ifotony mailaka hafa. Teo amin'ny takelaka iray aho momba ny paikady fananganana lisitra tsotra ary nofenoina ny efitrano… efitrano itsanganana ihany!
Mamolavola mailaka mahasoa amin'ny finday
Inona no fahatsapana ny soatoavinao?